BBC Somali - Warar - Israel oo weerar ku qaadday Qasa
Israel oo weerar ku qaadday Qasa
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Oktoobar, 2012, 09:06 GMT 12:06 SGA
Weerarka Israel waxa uu dhacay maalin kadib markii uu magaalada Qasa booqday Amiirka dalka Qadar
Weerar cirka ah oo ciidanka Israel ay ku qaadeen Marinka Qasa ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan lix dagaalyahanniinta Falastiin, iyadoo qaar kalena ay ku dhaawacmeen.
Militeriga Israel ayaa sheegay in kooxdan lagu qaaday weerarka iyaga oo isku diyaarinayay inay gantaallo ku ridaan dhinaca Israel.
Israel waxay sheegtay in ugu yaraan 50 gantaal ay ku dhaceen dhulkeeda, oo si xun ay ugu dhaawaceen saddex qof.
Iskuullada ayaa la xiray soohdinta labada dhinacba, iyada oo laga cabsi qabo weerarro dheeraad ah.
Dhacdadan ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markii Amiirka dalka Qadar oo booqday Marinka Qasa markii ugu horreysay tan iyo markii ay maamulka la wareegeen dhaqdhaqaaqa Xamaas muddo shan sano laga joogo.